२०७६ श्रावण २६ आइतबार १६:५६:००
त्यतिबेला हामीले संविधान संशोधनको मुद्दामा आन्दोलन गरेको भए आज नेपाली जनताले राजपाका कारणले हाम्रो विकास भएन भनेर भन्ने अवस्था बन्थ्यो । राजपाका कारण ओलीजीले समृद्ध बनाउन चाहनुभएको देश समृद्ध हुन पाएन भन्ने कुरा स्थापित गर्ने प्रयास हुन्थ्यो ।
शान्ति सुरक्षा, सुशासनका कुरामा पनि काम गर्न सकेन । त्यसपछि हामी समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएका हौं । अहिले हामी विपक्षमा हो । अहिले फेरि संविधान संशोधनका कुराहरु टड्कारो रुपमा उठेको छ । सरकारसँग औपचारिक रुपमा फेरि एकपटक कुरा गर्छौँ । सरकारले हामीले उठाएका कुरामा गम्भीर भएन भने वर्षायाम सकिनेबित्तिकै हामी संघर्षमा जान्छौं । अहिले संसदभित्रै छौं । त्यो संघर्ष सडकमा जान सक्छ । संविधान संशोधनको मुद्दामा कहिलेसम्म सम्बोधन भएन भने राजपा सडकमा जान्छ ?
त्यतिधेरै जनसंख्याको अवस्थालाई आँखा चिम्लिएर, अनदेखा गरेर यो मुलुकको प्रगति कसरी सम्भव छ ? हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेस र अहिलेका नेकपाका नेताहरूले भारतमै बसेर नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गरे । उनीहरूको क्रान्तिमा भारतको भूमिका देखिन्छ नै, तर उनीहरूको राष्ट्रियता, देशभक्तिको सवालमा प्रश्न नउठ्ने तर मधेसीहरूले बारबार स्पष्टीकरण दिनुपर्ने किन ?